« prev 1 … 879 880 881 882 883 … 900 next »
Waaxda dambi baarista oo soo bandhigtay dad ku eedeysan Shabaabnimo (Dhageyso)
Sagal Radio Services • Audio • October 23, 2012
Waaxda dambi baarista ee ciidamada booliska Soomaaliyeed, ayaa maanta soo bandhigay dad lagu eedeynaayo Shabaabnimo, dilal barer ah, boob iyo handadaadba.
Weerrar madaafiic ay dad ku dhaawacmeen oo xalay Afmadow lagu qaaday
Ugu yaraan inta la xaqiijiyay lix ruux oo rayid ah, ayaa ku dhaawacantay weeraro madaafiic loo adeegsaday oo xalay lagu qaaday degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose.
Ammaanka caasimadda Soomaaliya oo la adkeeyay
Hay'adda nabad sugidda qaranka, ayaa shaaca ka qaadday in ammaanka caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho ay wax badan iska badaleen, markanna la isku haleyn karo, kadib howl gallo amniga lagu sugayo oo si isdaba joog ah ay ciidamadu ka sameeyeen Muqdisho.
Wariye xalay Muqdisho lagu weeraray, oo soo kabanaya
Kooxo dablay ah, ayaa xalay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ku dhaawacay wariye u shaqeynaayay idaacadda Shabelle ee magaalada Muqdisho.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • October 21, 2012
Warka Radio Sagal waxa uu maanta idin kaga imaanaya Studiyaha Sagal Radio ee magaalada Nairobi.
Danjiraha M/Yurub ee Soomaaliya oo Garroowe kula kulmay madaxda Puntland
Sagal Radio Services • News Report • October 21, 2012
Madaxwaynaha Puntland ayaa maanta xafiiskisa ku qaabilay Wadfdi uu hogaaminayey safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Michele Cervone iyo xubno uu hogaaminayey.
Kismaayoo xalay bandow ka dhaqan galay
Bandow ay xalay saareen Kismaayo, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xulafadooda, ayaa halkaasi ka dhaqan galay xalay.
Cuuryaamiin ku dhaqan Baladweyne oo lacag loo qeybiyay
Sagal Radio Services • News Feature • October 21, 2012
Lacag ay iska soo aruuriyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeedda gobolka Hiiraanm kuna dhaqan dalka dibbaddiisa, ayaa maanta waxa loo qeybiyay illaa iyo shan boqol oo ruux, kuwaas oo ka mid ah cuuryaamiinta ku dhaqan gobolka Hiiraan.